Fulkaanaha Yellowstone: astaamaha, cilmiga dhulka iyo qaraxyada | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah fulkaanaha ugu caansan adduunka waa volcano huruud ah. Waxay ku taalaa Yellowstone National Park ee Maraykanka waxayna ku taal woqooyi-galbeed geeska Wyoming. Waa volcano ay ku soo dhacday seddex jeer 2.1 milyan oo sano ee la soo dhaafay waxayna sameysay caldera cabirkeedu yahay qiyaastii 55 × 72 30 kiiloomitir.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha, cilmiga dhulka iyo qaraxyada fulkaanaha Yellowstone.
2 Qaraxyada Folkaanaha
3 Khatarta Folkaanaha ee Yellowstone
4 Dhulgariir la xiriira
Waxaa jira heerar kala duwan oo loogu talagalay asalka barta kululeynta Yellowstone. Qaar ka mid ah khubarada cilmiga dhulka ayaa ku andacoonaya inay ku samaysantay isdhexgalka xaaladaha maxalliga ah lithosphere iyo isugeynta gogosha sare. Qaar kale waxay tilmaamayaan inay ka soo bilaabatay gogosha qoto dheer (baalasha gogosha). Murankan ayaa sabab u ah muuqaalka kore ee baro kulul oo ku jira diiwaanka juqraafiga. Intaas waxaa sii dheer, qulqulka basalt-ka Colombia wuxuu u muuqday isla waqtigaas, taasoo keentay in la isla dhexmarayo asalkiisa.
Godku wuxuu ku yaal meel kulul. Goobaha Yellowstone ee hadda jira wuxuu ka hooseeyaa Yellowstone Plateau. In kasta oo ay u muuqato inay ka gudbeyso dhulka bari ilaa bari, kulkululku runtii aad buu uga qoto dheer yahay dhulka waana uu taagan yahay.
18-kii milyan ee sano ee la soo dhaafay, hudheelka Yellowstone waxay soo saartay qaraxyo rabshado wata iyo daadad basalt ah. Ugu yaraan 12 ka mid ah qaraxyadaas ayaa aad u weynaa oo lagu tilmaamay inay yihiin qaraxyo waaweyn. Mararka qaar qaraxyadaasi waxay si dhakhso leh u faaruqiyaan magma la keydiyay oo dhulka dushiisa ku burburay qol qolyo magma leh, oo sameysmay fulkaano loogu yeero. Niyad jabka juqraafiyeed ee afka. Godadka Fulkaanaha ee ay samaysteen waxyaalaha qarxa waxa ay noqon karaan kuwo waaweyn oo qoto dheer sida harooyinka waaweyn iyo kuwa dhexe, waxayna sababi karaan in aagag waaweyn oo buuraley ah la waayo.
Wadooyinka ugu da'da weyn ee ku yaal godka labada dhinac ee soohdinta Nevada-Oregon ee u dhow McDermit. Mid ka mid ah godadka, Burcad-Bruno-Jabici oo ku taal koonfurta Idaho, waxaa la sameeyay 10-12 milyan oo sano ka hor, samayskeeduna wuxuu uga tegey lakab dambas ah 30 cm oo qoto dheer waqooyi-bari Nebraska.
17-kii milyan ee sano ee la soo dhaafay, Fulkaanaha Yellowstone wuxuu soo saaray 142 ama in ka badan oo ka soo dillaac god. Beerta Qaranka ee Yellowstone waxay ku fadhidaa afar godad foolkaano oo is dulsaaran (US NPS).
Beeraha Fulkaanaha ee soo saara qaraxyada waaweyn ee aan caadiga ahayn waxaa loogu yeeraa supervolcanoes. Sidaas lagu qeexay, Yellowstone supervolcano waa goobta volcanic-ka ee soo saartay seddexdii ugu dambeysay ee ka-soo-baxa aagga Yellowstone kulul. Waxay sidoo kale soo saartay qarax yar oo sameeyay West Thumb Lake 174.000 sano ka hor.
Socodka ugu dambeeyay ee lafaha wuxuu dhacay qiyaastii 70.000 oo sano kahor iyo qarax xoog leh ayaa ka dhacay West Thumb Lake galbeedka Yellowstone qiyaastii 150.000 sano kahor. Waxaa sidoo kale jira qiiq uumiya. 13.800 sano ka hor, qarax uumis ayaa ka sameeyay god 5 dhexroor dhexdhexaad ah oo ku yaal Mary Bay oo ku yaal cidhifka harada Yellowstone ee bartamaha ceelka.
Maanta, dhaqdhaqaaqa fulkaanaha wuxuu ku yimaadaa marinno fara badan oo dhulka hoostiisa ah oo ku baahsan gobolka oo dhan, oo ay ku jiraan geyserkii caanka ahaa ee 'Old Faithful geyser', iyo geeddi-socodka ballaarinta carrada ee tilmaamaysa sii socoshada ballaadhinta qolka magma. Qarxa fulkaanaha iyo dhaqdhaqaaqa dhulka hoostiisa ka socda awgiis, xayndaab weyn oo magma ah ayaa ku hoos yaal dusha sare ee dusha sare.
Magma qolkaani wuxuu ka kooban yahay gaas iyo kaliya wuu ku milmi karaa cadaadiska weyn ee magma. Haddii cadaadiska la sii daayo illaa xad sababtoo ah isbeddelada cilmiga dhulka qaarkood, qayb ka mid ah goobooyinka gaaska la kala diray ayaa sameysmaya, taasoo keeneysa in magma ay ballaarto. Haddii ballaarintani ay soo saarto sii deyn weyn oo cadaadis ah, waxay sababi kartaa falcelin aan la xakamayn waxayna u horseedi kartaa qarax gaas oo rabshad wata.
Khatarta Folkaanaha ee Yellowstone
Intii u dhaxeysay 2004 iyo 2008, waxaa kordhay dusha sare ee godka Yellowstone ku dhowaad 7,6 cm sanadkiiba, in kabadan seddex jibaar ka badan inta la arkay tan iyo markii cabbiraadahan ay bilaabeen 1923. US, Jaamacadda Utah, Adeegga Beerta Qaranka iyo Yellowstone Volcano Observatory ayaa yiri:Ma aragno wax caddeyn ah oo muujinaya in qarax kale oo masiibo ah uu ka dhici doono Yellowstone mustaqbalka dhow. Dhacdooyinka soo noqnoqda ee dhacdooyinkan mid caadi ah ama la saadaalin karo midna maaha ”
Sida laga soo xigtay daraasad ay sameysay National Geographic Society, qaraxa labaad ee weyn ee Yellowstone waxay u badan tahay inuu ka dhaco mid ka mid ah saddexda aag ciladood ee is barbar socda ee ka gudbaya jardiinka jihada woqooyi / waqooyi-galbeed. Laba ka mid ah aagaggan ayaa soo saaray qulqulo qulqulaya qulqulaya intii lagu jiray waxqabadkii ugu dambeeyay ee supervolcano, 174.000-70.000 sano ka hor, aagga saddexaadna waa aagga ugu badan ee gariirrada sannadihii la soo dhaafay.
Dhulgariir la xiriira
Dabeecadda fulkaanaha iyo farsamada aagga awgeed, godka Yellowstone waxaa soo mara 1,000 ilaa 2,000 gariir sanad kasta. Mararka qaarkood, tiro aad u badan oo gariir ah ayaa lagu diiwaangeliyaa waqti gaaban.
Daraasaddooda, cilmi baarayaashu waxay isticmaaleen shabakad ka kooban seismographs oo ku yaal hareeraha beerta si ay u qarxiyaan qolka magma. Mawjadaha ayaa si tartiib tartiib ah u socdaalaya markay marayaan waxyaabo kulul, qayb ahaan dhalaalay, si aad wax uga cabbiri karto hoosta. Sida kooxda saynisyahannadu arkeen, godkan magma waa weyn yahay: wuxuu u dhexeeyaa 2 kiiloomitir iyo 15 kiiloomitir oo qoto dheer, qiyaastii 90 kiiloomitir dhererkiisuna yahay 30 kilomitir ballaadhan.
Waxay sii fidineysaa waqooyiga-bari ee jardiinada marka loo eego daraasadaha kale ee la muujiyey oo ay ku jiraan isku-dar ah adag iyo lava. Aqoonteenna, khariidad ka mid ah cabirkan waligeed lama soo saarin. Natiijooyinkaas, cilmi baarayaashu waxay si fiican u qiimeyn karaan halista ka imaanaysa kooxaha waaweyn ee aan degganeyn. Yellowstone isha ugu weyn ee kuleylka waxay u dhexeeysaa 405 ilaa kudhowaad 2.900 kiilomitir dusha sare. Waxay ka imaan kartaa xudunta dareeraha ah. Saynisyahannadu horeyba way u ogaayeen in qolka magma uu ka sarreeyo kaydka biyaha oo uu ka soo jiito magma Waxaa laga helaa dusha 5 ilaa 14 kiiloomitir dusha sare waana shidaalka geysyada, barkadaha uumiga iyo meelaha kale ee caanka ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto fulkaanaha Yellowstone iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Fulkaano Yellowstone
Wabiga ugu dheer Yurub